Mogadishu Journal » 2018 » April » 26
Ra’iisul Wasaaraha oo shir guddoomiyay shir looga hadlayay amniga guud ee dalka
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa Maanta shir guddoomiyay shir looga hadlayay amniga guud ee Dalka, kaasoo ay kasoo qayb galeen xubno ka socda Beesha Caalamka. Shirkan ayaa Diiradda lagu saaray amniga Dalka iyo u diyaar garoowga shirka Tobaadka soo...
Cabdiwali Muudeey oo xildhibaannada u soo bandhigay Dastuurkii la xaday
Mjournal :-Xildhibaanada ayaa loo qeybiyay nuqulkan oo ay ka muuqdeen qodobo ay isku raaceen lixdii Hoggaamiyeyaasha saxiixayaasha Road Map-kii dalka looga saarayay Kumeel gaarka. Hase ahaatee arrimaha layaabka leh ayaa waxaa ka mid ahaa in qodobada qaar ee nuqulka dastuurka uu...
Maxkamad ku taala Somaliland oo maanta xukun adag ku riday Boqor Buur Madoow
Mjournal : -Maxkamada Magaalada Hargeysa ayaa maanta xukun adag oo xabsi ah ku riday Boqor Cismaan Ow-Maxamuud (Buurmadoow) oo dhawaan socdaal aan maamulka raali ka aheyn ku tagay Deegaanada Puntland. Maxkamada magaalada Hargeysa ayaa Boqor Buurmadow ku riday shan sano oo xabsi...
Mjournal :-C/wali Maxamed Cali (Gaas), Madaxweynaha Maamulka Puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday Dowladda Federaalka Soomaaliya, kadib hadal uu warbaahinta ku siiyay dalka Isu taga Imaaraadka Carabta. Gaas ayaa marka hore sheegay in Puntland ay geli karto heshiisyo caalami ah,...
Mjournal :-Maanta ayaa waxaa la soo gaba gabeynayaa hadal jeedinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Golaha shacabka, taas oo sida ay sheegeen guddiga qaban qaabada doorashada ay dhici doonto 30ka bishaan Abriil. Shan Musharax ayaa maanta lagu wadaa in ay...